FIVAROTANA MANDRITSIKA ARY DILIGENCE - Million Makers
FIVORIANA SY DÉGERMETY
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fanarahan-dalàna
Manavotra ny vidiny
Miantoka ny fanapahan-kevitra tsara
Miantoka ny fitohizan'ny orinasa
Miantoka ny halavan'ny taona
Mialà amin'ny ady ara-dalàna
Mialana ny fatiantoka ara-bola
Fidirana eo no ho eo ny traikefa an-taonany
Ny ekipan'ny fanarahan-dalàna sy ny fahazotoana maneran-tany dia manam-pahaizana be dia be momba ny fitantanan-ketra, hetra, toekarena ary ny fanombanana. Tena zava-dehibe ihany koa, manana ny traikefa azo ampiharina isika ary ilaina amin'ny fahaizana ilaina mba hamaritana ireo olana amin'ny orinasa manokana ary ny ambaratonga manokana momba ny indostria ary manombatombana ireo zava-misy eran-tany izay manosika ny soatoavin'ny orinasa.
Miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifa sy ny mpanolotsaina isika mba hamolavola tanjona, fanarahan-tena tsy miankina ary fahavitrihana mifanaraka amin'izay ilain'ny mpanjifa. Manome tatitra natao natao hanoherana ny fandinihan'ny manampahefana hetra, auditora, fitsarana, mpanelanelana ary antoko hafa liana izahay.
Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, miaraka amin'ny tontolo mifehy ny fanaraha-maso sy ny sakana ara-dalàna, ny orinasa miditra amin'ny hetsika fanarenana ny orinasa, Mergers and Acquisitions, Start-up, tetikasa lehibe, asa fihodinana, fanondranana ary fanafarana rehetra dia miatrika fanamby sy fifanarahana amina làlana hafa rehetra eo amin'ny hazo fijaliana. -aritry ny hetsika ny mpiasa, fananganana orinasa, fanitarana ary na izany ho an'ny faharetana sy ny fivelomana. Milliona Makers dia manome torolàlana sy fanohanana amin'ny orinasam-pifandraisana rehetra amin'ny fankatoavana sy ny fifehezana ilaina.
Ho an'ny fanentanana sy fahazoana ary famerenana amin'ny laoniny ny orinasa
Ny famakafakana mandritra ny fanangonana sy ny fahazoan-dàlana, ny divesture ary ireo karazana hetsika fanarenana orinasa dia matetika mifantoka amin'ny "sary an-tsary" sy ny fanalefahana ny loza ara-bola - matetika mahita ny lafy tsikera amin'ny fanarahana fifindra-monina. Ny fiovan'ny orinasa tsy misy fijerena tsara ny fiantraikan'ny fifindra-monina dia mety hiteraka fikomiana lehibe ho an'ny mpiasa tena ilaina sy ny fahombiazan'ny fampifangaroana. Milliona Makers dia nanampy ireo orinasa handrakotra ny lafiny mifandraika amin'ny fifindra-monina ataon'ny hetsika orinasa mandritra ny am-polony taona maro. Ny fanadihadiana ataontsika dia tokony hisy ny famakafakana lalina momba ny fifindra-monina, ny fahavitrihana ary ny fitantanana ny hetsika fifindra-monina ilaina.
Ho an'ny fanohanana tetikasa
Matetika ireo orinasa manerana an'izao tontolo izao dia mitaky ny hetsika an-jatony ho mpiasa an-jatony maro, manolotra fanamby samihafa mifototra amin'ny isan'ireo mpiasa, ny andraikiny ary ny fanomezan-dàlana ary ireo firenena tafiditra amin'izany. Azontsika atao ny miara-miasa akaiky aminao amin'ny fanatanterahana tetikasa mba hanomezana torolàlana momba ny fitazonana ny fanarahana ireo lalànan'ny fifindra-monina eo an-toerana. Amin'ny fiaraha-miasa aminao, afaka manangana drafi-javatra mahazatra izahay mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana sy kendrenao, hanampy anao hanohy ny diany ary hahatratra ny tanjon'ny tetikasa.